Saddex-Lakab Basket Ka Laadlaadda Miraha Hal-abuurka Laalaabida Biraha ah Farshaxanka Laga saari karo
SHUNDA Crafts waa soo saarida, dhoofinta, iyo bixinta dhammaan noocyada farshaxanka iyo alaabta farshaxanka. Waxaan bixinaa noocyo kala duwan oo badeecooyin iyo adeegyo la habeeyey, oo u dhexeeya horumarinta alaabta ilaa kobcinta barnaamijka. Waxaan ku takhasusay Muraayad (Muraayada muraayada ah, Muraayada Dayaxa, Muraayada Dayaxa badhkeed, Muraayada wareegsan, Muraayada shelf leh, Muraayada birta, Muraayada danbe ee alwaax, iwm). Farshaxanka & Farshaxanka (Shafaf alwaax ah, shalef bir ah, shalef leh muraayad, shelf xadhig, shayada resin, farsamada gacanta, sanduuq alwaax ah, sanduuqa khamriga, sanduuqa nudaha iwm) . Sannado badan oo waayo-aragnimo iyo dadaal ah, waxaan u horumarinay qurxinta guriga silsilad sahayda warshadaha, iyo suuqgeyn si nidaamsan silsilad warshadaha, oo ay ku jiraan muraayad, shelf, nalalka iyo alaabta la xidhiidha. Oo waxaan leenahay nidaam maarayn tayo adag oo dhamaystiran si loo xakameeyo tallaabo kasta laga bilaabo alaabta, muunado, wax soo saarka, baakaynta ilaa shixnadda si loo hubiyo in alaabta kasta si fiican.